Wararka - Sida loo hagaajiyo xasilloonida muujinta LED
Waxaa loo baahan yahay in korontadu noqoto mid xasilloon, iyo ilaalinta dhulka waa inay noqotaa mid wanaagsan. Waa inaan loo isticmaalin xaalado dabiici ah oo xun, gaar ahaan cimilada hillaaca ee xooggan. Si looga fogaado dhibaatooyinka suurtagalka ah, waxaan dooran karnaa badbaadin dadban iyo ilaalin firfircoon, isku day inaad ka ilaaliso shayada waxyeellada u keeni karta shaashadda midabka buuxa shaashadda, oo si tartiib ah u tirtir shaashadda marka aad nadiifinaysid, si loo yareeyo suurtagalnimada dhaawac. Marka hore dami muujinta LED -ka ee Maipu, ka dibna dami kombiyuutarka.
Hayso qoyaanka bay'ada ee shaashadda muujinta midabka buuxa ee LED-ka loo adeegsado, hana u oggolaan in wax kasta oo leh qoyaanku ay soo galaan shaashadda muujinta midabka buuxa ee LED. Haddii shaashadda weyn ee muujinta midab-buuxa leh oo ay ku jirto qoyaan la shido, qaybaha muujinta midabka buuxa ayaa xumaanaya oo dhaawacmi doona.
Haddii ay biyo ku jiraan shaashadda sababo kala duwan awgood, fadlan isla markiiba dami korontada oo la xiriir shaqaalaha dayactirka illaa inta guddida bandhigga ee shaashadda gudihiisa ka engegaan.
Beddel isku xigxiga shaashadda bandhigga LED:
J: Marka hore shid kumbiyuutarka koontaroolka si aad si caadi ah u shaqeyso, ka dibna shid shaashadda muujinta LED.
B. Guud ahaan, shaashadda waa in la shidaa ugu yaraan bishiiba hal mar in ka badan 2 saacadood.
Ha ku ciyaarin dhammaan caddaanka, dhammaan casaanka, dhammaan cagaarka, dhammaan buluugga iyo sawirro kale oo dhalaalaya oo buuxa muddo dheer, si aysan u keenin hadda xad -dhaaf ah, kuleyl xad -dhaaf ah ee khadka korontada, waxyeellada laambadda LED -ka, oo saameyn ku yeelata nolosha adeegga shaashadda bandhigga.
Ha kala qaadin ama ha kala saarin shaashadda sida ay doonto! Shaashadda soo-bandhigga midab-buuxa leh ayaa si dhow ula xiriirta isticmaaleyaasheenna, marka waa lagama maarmaan in shaqo wanaagsan laga qabto nadaafadda iyo dayactirka.
Soo -gaadhista jawiga dibadda muddo dheer, dabayl, qorrax, boodh iyo wixii la mid ah way sahlan yihiin inay wasakhoobaan. Muddo ka dib, waa inay shaashadda ku taal gabal boodh ah, oo u baahan in la nadiifiyo waqtiga si looga hortago in boodhku duubmo dusha sare muddo dheer, taasoo saamaynaysa saamaynta daawashada.
Dusha sare ee shaashadda ee muujinta LED -ka waxaa lagu tirtiri karaa aalkolo, ama waxaa lagu nadiifin karaa buraash ama nadiifiyaha faaruqinta, laakiin laguma mari karo maro qoyan.
Shaashadda weyn ee shaashadda bandhigga LED waa in si joogto ah loo hubiyaa si loo arko inay si caadi ah u shaqeyso iyo haddii wareegga uu dhaawacan yahay. Haddii ay shaqayn weydo, waa in lagu beddelaa waqtiga. Haddii wareegga waxyeello soo gaarto, waa in la dayactiro ama la beddelo waqtiga.